Ishe Byron. Chiitiko chekuzvarwa kwake. 4 yenhetembo dzake. | Zvazvino Zvinyorwa
Raive zuva rakaita nhasi 1788 when akaona mwenje wayo wekutanga George Gordon Byron, 6th Baron weByron, muLondon. Gare gare akakwanisa kugadzira mwenje iwoyo wekupenya wavakapfeka munguva yavo kusvika zvave mumwe wevanyanduri veChirungu vane mukurumbira wenguva dzese. Kuyemurwa muzuva rake nenyika dzekumusha kwedu Bécquer uye Espronceda, Byron inomiririra sevashoma iyo quintessential yerudo yakatukwa gamba uye mudetembi. Nhasi ndaverenga 4 yenhetembo dzake kurangarira.
1 Chaive chii
2 Nhetembo ina
2.2 Kutsvoda kwekutanga kwerudo
2.3 Famba wakanaka
2.4 Ndakakuona uchichema
Kure nazvo zvakajairika, eccentric, kupokana, zvisina maturo uye zvinokakavara, zvipikisheni zvinowanda kana uchitaura nezvazvo. Akatambura izvo zvava kunzi Bipolar kusagadzikana kana manic-depression syndrome, chimwe chinhu icho vazhinji vakafunga sechikonzero cheanoshamisa masimba ehunyanzvi.
Kuyemura kwake kwaive varombo, vakasarudzika uye vanosiririsa munharaunda uye akafunga vamwe vese vanyengeri, kunyanya machinda, kwaaive. Zvakare nguva dzose aidzivirira vasina simba nevakadzvinyirirwa, uye kutsigira kwake Spain mukutarisana nekupinda kwaNapoleon, pamwe nekuzvimiririra kwenyika dzeSpain-America, zvinozivikanwa. Y mifananidzo yake yemacorsairs, vapambi kana mafiribhuru ndiyo paradigm yeshoko rerudo.
Kuda kwake kukuru kwekambani yemhuka, kunyanya imbwa yake, zvakare kuri kupfuura kuzivikanwa. Wese munhu anoziva chirevo chakakurumbira chakataurwa kwaari:
Kunyanya kuziva varume, kunyanya ndinoda imbwa yangu.
Nhasi Ndinoda kurangarira mundangariro dzako idzi nhetembo ina yeakawanda kwazvo uye akanaka zvekuti iye akanyora. Asi Byron inofanirwa kuverengerwa mazuva ese.
Mweya wangu wakasurukirwa unochema wakanyarara,
kunze kwekunge moyo wangu uripo
akabatana neyako mumubatanidzwa wekudenga
yekugomera pamwe uye kudanana.
Ndiwo murazvo wemweya wangu kunge aurora,
kupenya munzvimbo yeguva yeguva:
kunenge kutsakatika, kusingaonekwe, asi kusingaperi ...
kunyange rufu harukwanise kurusvibisa.
Ndirangarire! ... Pedyo neguva rangu
usapfuure, kwete, usina kundipa munamato;
nekuti mweya wangu hauchazotambudzwa zvakanyanya
pane kuziva kuti wakanganwa kurwadziwa kwangu.
Inzwa izwi rangu rekupedzisira. Haisi mhosva
namatira avo vaive. handina kumbo
Ini ndakakubvunza pasina: kana ndapera ndinokumbira kwauri
kuti paguva rangu wakadonhedza misodzi yako.
Kutsvoda kwekutanga kwerudo
Kusina fungidziro dzako dzerudo,
Iwo mamvemve enhema akarukwa neupengo;
Ndipei mweya unopera nekupenya kwawo kusingaperi,
Kana kubvutwa kunogara kwekutanga kutsvoda kwerudo.
Hongu, vadetembi, mazamu ako nemafungiro anopenya,
Iko kushuva mumusango kuchatamba neshungu;
Uye kubva kufemerwa kurumbidzwa manoni ako anoyerera,
Asi vanogona kumboravira kutsvoda kwerudo kwekutanga here?
Kana Apollo achifanira kuramba rubatsiro rwako,
Kana vapfumbamwe vanoda vari kubasa kwako;
Usavakumbirise, taura zvakanaka kwaMuses,
Uye edza mhedzisiro yekutanga rudo kutsvoda.
Ndinokuvenga, uye ndinovenga nziyo dzako dzinotonhora,
Kunyange vakachenjera vachindipa mhosva,
Uye asingashiviriri haatenderi;
Ini ndinogumbatira zvinofadza zvinoyerera zvichibva pamoyo,
Uyo kurova kwemoyo uye mufaro ndiko kutsvoda kwekutanga kwerudo.
Vafudzi vako nemapoka avo, iwo madingindira anonakidza,
Vanogona kunge vachinakidza asi havazombotama.
Arcadia inowonekera sekurota kwemavara akanaka,
Asi zvingaenzaniswa sei nekutanga kutsvoda kwerudo?
O, chirega kusimbisa murume iyeye, kubva paakamuka
Kubva mudzinza raAdamu, akarwa nenhamo!
Mamwe mapasuru eDenga anodedera paPasi,
Uye Edheni anomuka nekutanga kutsvoda kwerudo.
Kana makore aoma chando ropa, apo mafaro edu apfuura,
(Inoyerera kwemakore pamapapiro enjiva)
Ndangariro inodiwa kwazvo ichagara iri yekupedzisira,
Yedu yakanaka kwazvo monument, iko kutsvoda kwerudo.
Famba wakanaka, sousiku
Yemamiriro ekunze akajeka uye nedenga rine nyeredzi;
Uye zvese zvakanakisa zverima nechiedza
Inosangana mukuonekwa kwake uye mumaziso ake:
Saka yakagadziriswa neiyo nyoro mwenje
Denga iro rinoramba zuva rakajairika.
Mumvuri wakawandisa, ranzi shoma,
Nyasha isina zita ingadai yakadzikira
Iyo inomutsa mune yega yega kuruka kwechitema kupenya,
Kana zvinyoronyoro kuvhenekera kumeso kwako;
Iko kune akanyorova anotapira pfungwa anoratidza
Akanaka sei, akanaka sei imba yake.
Uye padama iro, uye pahuma iyo,
Iwo akapfava, akadzikama, uye panguva imwechete achitaurisa,
Kunyemwerera kunokunda, mavara anopenya,
Uye ivo vanotaura nezvemazuva akararama mune zvakanaka,
Pfungwa murunyararo nezvose
Mwoyo une rudo rusine mhaka!
Ndakakuona uchichema! Yako misodzi, yangu
mumudzidzi wako webhuruu yaipenya zvisina zororo,
padanda rakapfava reruva.
Ndakakuona uchiseka! Uye inobereka May,
maruva akashatiswa nemhepo
vakatadza kukweva huroyi hwavo hwekufenda
iko kutaurika kwekunyemwerera kwako.
Kunge makore mudenga
kubva kuzuva vanogamuchira mwenje wakanaka kudaro,
kuti husiku irege kudzima nekutsvoda kwayo,
kana kudzora nyeredzi yakajeka nechiedza chayo.
Kunyemwerera kwako kunopa hupfumi
kumweya wakasuruvara, uye kutadza kwako kutaridzika,
inosiya kujeka kutapira kwakachena kwazvo
izvo zvinosvika pamoyo mushure mekufa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Ishe Byron. Chiitiko chekuzvarwa kwake. 4 yenhetembo dzake.